Mikasa ny fitsangatsanganana an-dranomasina avy any Florida Port Miami amin'ny 2021?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Mikasa ny fitsangatsanganana an-dranomasina avy any Florida Port Miami amin'ny 2021?
Travel Travel • Cruising • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny Carnival Cruise Line dia manokatra an'i Port Miami amin'ny 4 Jolay
Ny fandehanana amin'ny Carnival Cruise avy any Port Miami dia matetika manamarika ny fiantombohan'ny fialantsasatra mahafinaritra ho an'ny Amerikanina maro. “Faly be izahay fa tafaverina! ", Hoy i CarnivalCEO Arnold Donald androany.
Nandeha an-dranomasina lehibe ny Carnival Horizon tamin'ny 4 Jolay
Karnavalin'ny Cruise Line nanomboka ny sambo fitsangantsanganana voalohany tao aminy efa ho 16 volana avy tany PortMiami, The Cruise Capital of the World, androany tamin'ny fiaingan'ny Carnival Horizon, izay manome tosika lehibe ho an'ny toekarena eo an-toerana sy ireo asa an'aliny maro any South Florida izay tohanan'ny ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo.
Ny famerenenan'i Carnival ny serivisy any Miami dia manome vakansy andrasana fatratra ho an'ny vahiny ary manatsara ny toekarena na eo an-toerana na amin'ny fanjakana.
Florida no laharana voalohany amin'ny firenena amin'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo miaraka amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo izay manome $ 9 miliara mahery amin'ny fividianana mivantana ary tompon'andraikitra amin'ireo asa 159,000 mahery.
Ao Miami-Dade fotsiny, ny hetsika fitsangantsanganana an-tsambo dia miteraka fandaniana 7 tapitrisa dolara eo ho eo ary asa 40,000 437,000 isan-taona. Amin'ireo asa tohanan'ny indostrian'ny mpitsangantsangana 37 any Etazonia dia manodidina ny XNUMX% no any Florida.
Ny filoham-pirenena Carnival Cruise Line Christine Duffy, ny filohan'ny Carnival Corporation, ary ny CEO CEO Arnold Donald, ary ny ambasadaoron'ny marika karnavaly John Heald dia nanomboka ny fankalazana tamin'ny fombafomba fanapahana kofehy iray izay niarahaba tamim-pomba ofisialy ireo vahiny.
"PortMiami no laharam-pahamehanay voalohany amin'ny resaka sambo sy ny fidiran'ny mpandeha ary ny fiverenan'ny sambo miaraka amin'i Carnival Horizon dia dingana voalohany lehibe amin'ny famerenana ny orinasanay hiasa amina renivohitra tena ilain'ireo mpiasa an'arivony izay miankina amin'ny sambo fitsangantsanganana. indostria ho fivelomany », hoy i Duffy. "Ny taona lasa dia sarotra ny milaza ny kely indrindra ary tiako ny misaotra ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana sy ny eto an-toerana, PortMiami, sy ireo mpiara-miasa aminay ary mpamatsy anay noho ny fanohanan'izy ireo sy ny faharetany mandritra ity fotoana ity."
“Ny fiverenan'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo avy any Miami dia andro mahaliana ho an'ny olona lava any Miami. Manana mpikambana 800 eo ho eo izahay ao PortMiami ary nilatsaka hatramin'ny 80% ny karaman'izy ireo nandritra ny fampiatoana ny dia an-tsambo 16 volana. Androany tamin'ny sambo Carnival Horizon voalohany, miverina miasa izahay ary manantena ny hanohana indray ny fianakaviantsika, "hoy i Torin Ragin, filoha, International Longshoremen's Association (ILA) Local 1416.
Hiondrana an-tsambo anio i Carnival Horizon anio amin'ny 4 ora hariva ho an'ny sambo fitsangatsanganana enina andro miaraka amin'ny fijanonana ao Amber Cove (Dominican Republic) sy ny nosy tsy miankina Bahamian Half Moon Cay.
Ankoatry ny fialàn'i Carnival Horizon androany folakandro dia nandao an'i Galveston i Carnival Vista omaly, niaraka tamin'ny fiavian'i Carnival Breeze ny Galveston 15 Jolay ary ny Carnival Miracle dia nanomboka ny vanim-potoanan'ny Alaska tamin'ny 27 Jolay. Mardi Gras, ny sambo vaovaon'ny tsipika, miainga avy any Port Canaveral ny 31 Jolay. Hanomboka ny volana Aogositra ny sambo hafa ao amin'ny sambo Carnival.
Toa matroka izao tontolo izao tamin'ny Janoary rehefa nofoanan'i Carnival ny sambo fitsangantsanganana rehetra ho avy hatramin'ny 31 martsa- ary vao fanombohana io.